तिथि मेरो पत्रु » एक विभाजन को दुखाइ कसरी सुख गर्न
यो भनाइ जान्छ, छुट्टिदै गर्न कठिन छ. तपाईं एक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ भने त्यो कुनै पनि भावना वा भावनाहरूसित वहन, यो अन्य व्यक्ति चोट बच्न यो बन्द भंग गर्न आफ्नो दृष्टिकोण मूल्याङ्कन गर्न महत्त्वपूर्ण छ. उचित ब्रेक-अप शिष्टाचार तपाईं र तपाईंको पार्टनर सम्बन्ध मा गरिएको छ कसरी लामो मा धेरै हदसम्म निर्भर, कसरी गम्भीर सम्बन्ध छ, र वा छैन भावना आपसी छन्.
कुनै पनि सम्बन्ध अन्त्य कहिले वर्ग र दया संग गर्न प्रयास. यहाँ यो कुरा तोड्ने समय छ जब तपाईं को पालन गर्नु पर्छ केही सुझाव छन्, तर प्रत्येक सम्बन्ध सम्झना र प्रतिक्रिया फरक छ, प्रतिक्रिया रूपमा अनपेक्षित आशा.
तिनीहरूले त्यहाँ छैनन् भने छुट्टिदै लागि बहाना बनाउन प्रयास नगर्नुहोस्. बस सम्बन्ध तपाईं को लागि काम गरिरहेको छ किन छैन आफ्नो साझेदार बताउन. तिनलाई खुवाउने को आईआईटी तपाईं हो, यो छ मेई लाइन तपाईं आफ्नो साथी तल सजिलो दिँदै छन् जस्तै तपाईं महसुस बनाउन सक्छ, तर उसले सम्भवत यो माध्यम देख्नु हुनेछ र unlovable तिनीहरूलाई थप चोट पुर्याउने र heartache कारण छन् किन अप पनि कारण बनाउन सक्छ.
स्ट्रिङ तिनीहरूबाट साथ के
के तपाईं कसैसित माथि तोड निर्णय गर्नुभएको छ भने, आफ्नो सम्बन्ध बाहिर तान्न कुनै कारण छ. यो विभाजन अलग रहेर, तपाईं साझेदार बढी संलग्न बढ्दै हुन सक्छ, केहि तपाईं पक्कै पनि चाहँदैनन्. जब तपाईं एक सम्बन्ध अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो भावना बढाउन र विकास गर्न जारी छैन भनेर अन्य व्यक्तिको रूपमा चाँडै उचित सम्भव छ रूपमा थाहा.
राम्रो लागि यो अन्त
एक व्यक्ति फ्याँकिएको भइरहेको पछिल्लो कुरा सुन्न चाहन्छ द्वितीय वास्तवमा तिनीहरू प्रेममा अझै पनि हुँदा बस friends मलाई हाम्रो सम्बन्ध जारी राख्न चाहनुहुन्छ छ. यो सबै उनीहरूसित मित्रता निर्माण गर्न प्रयास गर्नु अघि के तपाईं भन्दा प्राप्त गर्न केही समय संग भंग भएको व्यक्ति दिन चिन्तित लागि सबै भन्दा राम्रो छ. साथै, तपाईं अन्य व्यक्ति अझै पनि तपाईं को लागि भावना harbors थाहा छ भने benefitsî सम्बन्ध संग एक ìfriends एउटा रोमान्टिक सम्बन्ध परिवर्तन गर्न प्रयास छैन. यो तपाईं जब रोमान्स पुनः जगाउन चाहनुहुन्छ कि अन्य व्यक्ति झूटो आशा दिन सक्छ, वास्त्वमा, तपाईं छैन. यो भ्रम नेतृत्व र लामो भावना चोट गर्न सक्छन्.
तोड निजी मा
तपाईं जब तपाईं कसैसित माथि तोड सार्वजनिक ठाउँमा छन् बस किनभने तपाईं सफलतापूर्वक दृश्य बनाउन देखि व्यक्तिको बन्द हुनेछ भन्ने लाग्छ. कहिलेकाहीं बलियो भावनाहरू कुनै कुरा अन्य मानिसहरू वरिपरि छन् कति छैन stifled गर्न सकिन्छ. सार्वजनिक ठाउँमा कसैले साथ भंग गरेर तपाईँले फ्याँकिएको भइरहेको को तनाव को शीर्ष मा एक संभावित लाजमर्दो स्थितिमा त्यस व्यक्ति लागिरहेका छन्. यो आफ्नो भाग मा आदर कमी देखाउँछ. छुट्टिदै कुनै पनि भावना असजिलोपन बिना व्यक्त गर्न सकिन्छ भनेर निजी मा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ.
सुनौलो नियम पालन
जतिसुकै तपाईं कसैसित माथि तोड निर्णय, यो के तपाईं निम्ति तिनीहरूलाई हुनेछ रूपमा सधैं अरूको निम्ति के मनमा सुनौलो नियम पालन गर्न ñ राम्रो छ. तपाईं फ्याँकिएको भइरहेको थियो भने, के तपाईं तिर इमानदारी र आदर देखाउन अन्य व्यक्ति चाहनुहुन्छ. तपाईंको ब्रेक अप रणनीति योजना बनाउँदा मन मा यो राख्न. तपाईं परिस्थिति उल्टाउन थिए भने उपचार हुने आशा थियो कसरी भन्दा एक तरिका को कुनै पनि कम मा आफ्नो साझेदार व्यवहार नगर्नुहोस्.
5 कुकुर मैत्री विचार एक पहिलो तारीख लागि